Anyị nwalere LG Optimus G | Akụkọ akụrụngwa
Anyị nwalere LG Optimus G
Nacho Cuesta | | Mobiles
Agbanyeghị na ọ dị n'ahịa ruo ọtụtụ ọnwa ma ọ bidolarị ikwu maka onye ga-anọchi ya, LG Optimus G smartphone na-aga n'ihu na-egosi na ngwaike ya abụghị ụbọchị Ọbụghị ncha ncha. Ihe akaebe nke a anyị nwere site na oge mbụ anyị malitere ịmekọrịta na ọnụ, na-egosi n'oge niile oke mmiri nke ekwentị ole na ole nwere ike ịnya isi taa.
Onye omekome ahụ na LG Optimus G dị oke mmiri bụ pSnapdragon S4 Pro quad-isi processor nke na-arụ ọrụ na oge nke 1,5Ghz. Na 2GB nke Ram ha na-enye aka ka ha nwee ike ịnụ ụtọ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa mmeghe na-enweghị usoro na-ata ahụhụ opekata mpe.
Mgbe ị nyochachara ngwaike gị na akara ngosi Antutu, anyị na-ahụ LG Optimus G dị na elu nke njedebe gam akporo kachasị ike ọ bụ naanị ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ ugbu a karịa Samsung Galaxy S4, Xperia Z, HTC One na, ruo n’ókè dị nta, Nexus 4 nke Google.
Na mgbakwunye na igosipụta ike, LG Optimus G bụ akara ya dị ebube Ihe ngosi 4,7-inch na TRUE HD IPS + panel. Ebe nlele dị egwu ma mkpebi nke 1280 × 768 pikselụ ezuru iji nweta njupụta nke pikselụ kwa inch nke 318. Dị ka anyị na-ekwu, ogo onyonyo gosipụtara na ihuenyo nke ekwentị a dị ebube, na-etu ọnụ maka ụfọdụ agba doro anya. ma na-enwu gbaa nke na-eme ka ihe niile mara mma.
N'ụzọ ezi uche dị na ya, site na ihuenyo nke ụdị dị otú ahụ, egosipụtara oke nke ọnụ site na ngosipụta. LG Optimus G na-atụle 131.9 × 68.9 × 8.5 millimeters na ịdị arọ ya bụ gram 145. Nke a na-amanye anyị jiri aka ya jiri njedebe Ọ gwụla ma anyị nwere nnukwu aka dịka ọ dị m, n'agbanyeghị nke ahụ, n'ihi na elu ya na-amị amị amị, a na-atụ aro ka ijiri otu aka jide ya n'aka nke ọzọ.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka atụmatụ nke ọnụ, LG Optimus G na-egosi akara ngosi mara mma ma mara mma. Ihu n'ihu na-egosiputa na-eji ire ụtọ, ihe niile na-acha oji mgbe ihuenyo kwụsịrị. Okpokoro akụkụ nwere ụfọdụ ngwa ngwa chrome na azụ nwere a kenkowaputa anya na a mgbanwe ntụpọ ụkpụrụ dabere na omume nke ìhè. Na mkpokọta, LG Optimus G dị ezigbo ụtọ na anya na imetụ aka, n'agbanyeghị na ọ na-atọkwa mkpịsị aka aka.
Na larịị ngwanrọ, ekwentị Ọ na-abịa site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Android 4.1.2 ma nwee usoro arụmọrụ nke LG n'onwe ya webatara na ekwentị a iji mee ka ọ zuo ezuo. Ọmụmaatụ, na QuickMemo anyị nwere ike dee na oge ọ bụla na aka ọnụ ọnụ kwesịrị mgbe anyị na-ahụ ihe anyị dere na ndabere. Mgbe ị na-eme vidiyo anyị nwere ike itinye mbugharị nke ihe ruru 5x na ịse foto nwere ike ime nke ọma site na naanị enyemaka nke olu anyị na ịkpọpụta isiokwu nke iji rụọ ọrụ ahụ.
La Batrị 2.100 mAh zuru oke iji rụọ ọrụ ụbọchị, na-ekwu okwu mgbe niile banyere iji ya eme ihe. Ihuenyo buru ibu ma na-enwu gbaa panel maka ọtụtụ oriri. Enwere ọnọdụ Eco anyị nwere ike ịhazi ka ọ masịrị anyị na nke na-egbochi ụfọdụ ọrụ nke ekwentị na-akpaghị aka.
N'ikpeazụ, ngalaba foto ahụ kwesịrị ịkọ. Na igwefoto azụ nwere ihe mmetụta 13 megapixel na ya na obere obere ikanam flash maka oge ndi ahu gbara gburugburu amaghi otutu. Igwefoto dị n'ihu bụ megapixels 1,3, zuru oke iji dekọọ vidiyo na 720 ma nwee oku vidiyo dị mma.
Taa, Optimus G ka bụ ọnụ iji banye na akaụntụ ọ bụrụ na anyị na-achọ ịrụ ọrụ na mma, na mgbakwunye, ịgafe ọnwa emeela ka ọnụ ahịa ya daa ma ugbu a enwere ike zụta ya na ụfọdụ ụlọ ahịa na-erughị euro 400, ọnụ ọgụgụ na-adọrọ adọrọ.
Ozi ndị ọzọ - Onye nọchiri LG Optimus G nwere ike ịnọ n'ụzọ
Njikọ - LG Optimus G
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Anyị nwalere LG Optimus G
Halo 4 ga-enwe Champions Champions na August
Aha 20 kachasị ewu ewu na Facebook